Banana Kong Blast dia lalao arcade ahafahanao mampiasa barika toy ny tafondro | Androidsis
Banana Kong Blast dia lalao arcade mavitrika izay manahaka tsara ilay Donkey Kong lehibe
Banana Kong Blast no arcade mahazatra tsy misy tomika ho an'ireo izay tsy mitaky fampiasa amin'izany Donkey Kong izany nanao ny zavatra nataony taona maro lasa izay. Raha ny marina, ny mpandray anjara fototra dia saika nitovy tamin'i Donkey tenany, ka raha tsy nahatratra lalao toa an'i Nintendo ianao dia ity no iray amin'ireo tsara.
Freemium miaraka amin'io angovo io izay mety hamoy fo amin'ny maro, nanomboka hilalao ianao ary hilalao mandra-pahatongan'ny lalao mitovy aminao. Iza no nieritreritra taona maro lasa izay, raha tsy misy fetra, raha mbola mandoa vola marina ianao hahazoana lalao premium.
1 Ampidiro ny tafondro barika miaraka amin'ny Mpanjakan'ny ala
2 Mihantona amin'ny lianas, mitsambikina mihetsika amin'ny rano ary maro hafa
3 Ho an'ireo nostalgic ho an'ny Donkey Kong
Ampidiro ny tafondro barika miaraka amin'ny Mpanjakan'ny ala
Ny Banana Kong Blast dia miankina amin'ny fidirana ao tafondro mitohy handefasana ilay maherifontsika mankany amin'ny manaraka ary hamita ireo ambaratonga. Ny zavatra tsara indrindra dia ny dynamism izay manjaka amin'ny lalao tsirairay ary hitondra anao amin'ny fotoana izay mihoatra ny mahafinaritra sy tena mampiala voly.
Ny tanjona na ny hevitra dia izay ny maherifontsika dia tsy diso anjara amin'ireny akondro mahaliana ireny miandry anao hamita ny ambaratonga amin'ny isa avo indrindra. Ho resaka faharetana kely daholo izany ary handinihana tsara ny làlana izay hitarika antsika Donkey Kong.
Ao amin'ny Banana Kong Blast dia manana tontolo iainana ahafahantsika mandray anjara isika ary amin'izany dia manampy ny tenantsika amin'izany. Izany hoe, ny antsika Prota dia mila mampiasa ny fanampiana rehetra azo atao hahatratra ny farany. Mandritra izany lalana izany no ahitanao ireo karazana fahavalo rehetra toy ny katroka na ireo barika izay hihetsika amin'ny vidiny amin'izao fotoana izao ka hianjera ny Donkey Kong antsika ary mamely mafy.
Mihantona amin'ny lianas, mitsambikina mihetsika amin'ny rano ary maro hafa
Ao amin'ny Banana Kong Blast dia fahagagana maro no miandry anay ary hatramin'ny ambaratonga voalohany dia ho tsapanao fa tsirairay avy ny iray amin'izy ireo dia natao ho tianao. Tsy voaravaka izy ireo hanomezana ny fahatsapana fa manana atiny marobe isika, saingy feno fotoana mahafinaritra toy ny mihantona amin'ny lianas ary mitsambikina amin'ny rano aza.
Tsy hita koa izy ireo ny boss farany amin'ny ambaratonga sasany ary raha esorinao izy ireo dia hanokatra ny lalana hamonjy ny namanao sasany. Tena traikefa nahafinaritra tao anaty ala izay tsy misy antsipiriany very, toy ireo feo mametraka ny tontolo iainany na ireo sarimiaina lavorary an'ilay maherifontsika izay ahitantsika faritra vaovao.
Raha atotaly dia misy fonosana 6 miaraka Haavo 48 miandry anao ary ambaratonga fanampiny izay handehananao amin'ny lambo very saina ary hahafahanao mitsambikina tsara. Tsy ampy koa ny fanaingoana zavatra 38 hanamboarana azy manokana ary noho izany dia mahafatifaty tsara ilay mpihetsiketsika noho ny fiainany miaraka amin'ireo sakaizany. Ireto zavatra ireto dia ilaina koa amin'ny fandefasana ny tranonao izay hanombohanao ny irakao sy ny fiainanao.
Ho an'ireo nostalgic ho an'ny Donkey Kong
Banana Kong Blast dia a lalao saika mitovy amin'ny angano Donkey Kong. Io protagonista gidro miaraka amin'ny barika io dia tena nodohan'i Nintendo ary ahoana no manohizantsika ny tsy fahatsiarovanay fa ny orinasa Japoney dia mitondra antsika an'io lalao io avy eo am-pelatanany; na dia manana an'i Mario indray aza isika. Na izany aza, ity sehatra arcade vaovao ity dia mamela anao hitia sy hilalao hahafahanao mankafy lalao tsara.
Ara-teknika izany manaitra ny fisian'ny feon-kira tsara sy mampiala voly, ireo tontolon'ny 3D izay mamokatra effets visuels manaitaitra sy atiny lehibe mizara ho 48 ambaratonga izay hankafizinao amin'ny fahazazanao. Ny tena marina dia izy ireo no nanao izany mba hahafahanao mitondra tsy fitoviana tsara amin'ny efijery findainao.
Banana Kong Blast dia lalao freemium misy angovo izay hampahatsiahy antsika mankany amin'ny Donkey Kong taloha izay misy nostalgia. Izy io dia manana ny akora ilaina rehetra hahatonga azy io ho lasa olon-tianao indrindra amin'ny fiverenany amin'ny fialan-tsasatra ary noho izany atsipazo ny fahaketrahana aorian'ny fialantsasatra. Lohateny ankasitrahana, na dia mankahala ny freemium aza isika.
Banana Kong Fipoahana
Tena tsara amin'ny sary
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Lalao Android » Banana Kong Blast dia lalao arcade mavitrika izay manahaka tsara ilay Donkey Kong lehibe
Spotify dia efa miasa amin'ny "Stories" azy manokana ho an'ny serivisy fandefasana mozika